November | 2008 | Myanmar Mp3 Album
November 30, 2008 saiagag International Artist New International Albums Guns_N_Roses4Comments
Eminem – Soul Intent – (Demo) -1995-VINYL
1. Fucking Back Stabber (Skit) [1:23] 2. Fucking Back Stabber [3:27] 3. Biterphobia [3:40]
November 30, 2008 saiagag Eminem International Artist 1 Comment
Big Bag, ချစ်သုဝေ – နာမည်ကြီး
၁။ ဘစ်ဘက် – နာမည်ကြီး ၂။ ချစ်သုဝေ – လမ်းနဲ့အလွမ်း ၃။ ဘစ်ဘက် – နားလည်ပါ ၄။ ချစ်သုဝေ – ဖြစ်တတ်တဲ့နေ့တစ်နေ့ ၅။ ဘစ်ဘက် – ကျွန်တော်မသိခြင်းများ (Unplugged Version ၆။ ချစ်သုဝေ – ကျောင်းပြေး ၇။ ဘစ်ဘက် – မယ်တင် ၈။ ချစ်သုဝေ – အစွန့်ပြစ်ခံလရောင် ၉။ ဘစ်ဘက် – မင်္ဂလာဆောင်ကိုရွှေ့လိုက်တော့ ၁၀။ ချစ်သုဝေ – အရွယ်ရောက်ရင် ၁၁။ ဘစ်ဘက် – ကျွန်တော်မသိခြင်းများ
November 30, 2008 Mad Computerist အဆိုတော် (အဖွဲ့) အဆိုတော် (မ) အခွေ (အများ) ချစ်သုဝေ Big Bag Myanmar Artist 13 Comments
November 30, 2008 mmsong Enya International Artist New International Albums5Comments
November 30, 2008 mmsong International Artist The Cranberries3Comments
စိုင်းထီးဆိုင် – အက်ဆစ်တစက်နှင်းတစက်
၀၁။ အမြတ်နိုးဆုံး နှင်း ၀၂။ အဆုံးမဲ့ လွင်ပြင် ၀၃။ မောင့်ရွှေမင်းသမီး ၀၄။ ဆူးတစ်ခက်ရဲ့ ရာဇ၀င် ၀၅။ စွန့်လွှတ်သူများ အတ္ထုပတ္တိ… ၀၆။ စေတနာ ရေစီး ၀၇။ သုခုမ အချစ်သခင် ၀၈။ အမေ့အတွက်ကျတဲ့ မျက်ရည် ၀၉။ ချစ်ရင်ပြုံးပါ ၁၀။ ငြမ်း
November 30, 2008 ME *MMA* အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) စိုင်းထီးဆိုင် Myanmar Artist 1 Comment
Dubby + Freddy – sample
၁။ Copy King ၂။ အမှာစကား ၃။ လမ်းသစ်ဖောက် ပေးပို့သူ – PT.Twen.T.8 247
November 29, 2008 mmsong Myanmar Artist Unreleased Albums7Comments
ဇင်အောင် – ကောင်မလေး
ကောင်မလေးအိမ်ရှေ့မှာဂီတာသွားတီးကြမယ်ဟေ့… ဒီသီချင်းလေးကိုဆိုပြီဂစ်တာကိုဒေါင်ဒင်ခေါက်ကြရမယ် လေ….ကောင်မလေးအိမ်ရှေ့မှာဂီတာသွားတီးလေ့ရှိတဲ့ ကောင်လေးတွေအတွက်တော့ ဒီသီချင်းကအရမ်းတန်ဖိုးရှိမှာပါ။ ပြောရင်းဆိုရင်းကျွန်တော်ဘဲအရင်သွားတီးလိုက် တော့မယ်ဗျာ။ နောက်ကျရင်အိမ်အပေါက်ဝကယောက္ခမ လေးခွနဲ့စောင့်နေဦးမယ်။ ကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်တဲ့သီချင်းပါ။ နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါဗျို့
November 29, 2008 ME *MMA* အဆိုတော် (ကျား) ဇင်အောင် Myanmar Artist Unreleased Albums 13 Comments
ရိုင်းဟန် – ကမ္ဘာမြေအိပ်ယာ
01- ဝေးနေချိန်အမုန်း 02- လမ်းခွဲလမ်းသွယ် 03- ပြန်ပေးဆပ်ခဲ့ 04- အိပ်မက်…ရှေ့ဆက် 05- မျှော်လင့်နေသူ 06- မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ကြ 07- ချစ်သူတွေရဲ့လမ်း 08- ကမ္ဘာမြေအိပ်ယာ 09- ပေးဆပ်ခြင်းနဲ့စွန့်စားလိုက် 10- မေ့ပစ်တော့ 11- တွဲလက်နိဂုံး 12- အချစ်မဲ့ကပွဲ 13- အိပ်မက်ရှင် All credit goes to “songslover” for Song Titles.
November 29, 2008 matchbox အခွေ (တကိုယ်တော်) ရိုင်းဟန် Myanmar Artist ရိုင်းဟန် 10 Comments